EDA Cityण कोभिड -१ by DutchtownSTL.org ected Dutchtown, सेन्ट लुइस, MO बाट प्रभावित शहर व्यवसायहरु को लागी
EDA Cityण कोभिड १ by बाट प्रभावित शहर व्यवसायहरु को लागी
प्रकाशित सेप्टेम्बर 21st, 2021
अमेरिकी आर्थिक विकास प्रशासन (EDA) छ सम्मानित CARES अधिनियम कोष लाई सेन्ट लुइस विकास निगम (SLDC) कोभिड 19१ negative बाट नकरात्मक रुपमा प्रभावित भएका वा महामारीका कारण उत्पन्न समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने सामान वा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायहरुलाई loansण दिन।
योग्यता र anण सर्तहरु
EDA loansण सेन्ट लुइस को शहर मा स्थित लाभ को लागी व्यवसाय को लागी हो। व्यवसायहरु सबै कर र व्यापार लाइसेन्स आवश्यकताहरु मा वर्तमान हुनु पर्छ। प्रत्येक $ ३५,००० उधारो को लागी, ब्यापार एक नौकरी सिर्जना वा कायम राखिएको हुनुपर्छ। Ansण क्रेडिट अनुमोदनको अधीनमा छन्। त्यहाँ एक $ १०० फिर्ता नहुने आवेदन शुल्क, एक १% उत्पत्ति शुल्क, र सम्भावित समापन लागत छ।
ब्याज दरहरु संग मात्र 10,000%मा शुरू संग $ 300,000 देखि $2सम्म rangeण मात्रा दायरा। Loanण को लम्बाइ कोष को लागी के को लागी प्रयोग गरीन्छ तीन देखि सात बर्ष सम्म पर्दछन्। Ansण कार्यशील पूंजी वा सूची, उपकरण, वा अचल सम्पत्ति को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। कोष अवस्थित debtण वा निर्माण र पुनर्वास लागत पुनर्वित्त को लागी प्रयोग गर्न सकिदैन।
कसरी सेन्ट लुइस EDA Programण कार्यक्रम को लागी आवेदन गर्ने
आबेदन दिनका लागि, यहाँ आवेदन डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाइँको पूरा आवेदन र $ १०० आवेदन शुल्क (सेन्ट लुइस स्थानीय विकास कम्पनीलाई देय) मा पेस गर्नुहोस्:
सेन्ट लुइस विकास निगम
ध्यान: श्री क्रिस Maguire
1520 2000१ Market मार्केट स्ट्रिट, Su०XNUMX
सेन्ट लुइस, MO 63103
तपाइँको आवेदन पेस गरे पछि, तपाइँ एक क्रेडिट अधिकारी अनुमोदन प्रक्रिया र कागजात समीक्षा मा एक loanण अधिकारी संग काम गर्नुहुनेछ। यदि तपाइँको loanण स्वीकृत छ, कोष जति सक्दो छिटो वितरित गरिनेछ। त्यहाँ लागू गर्न को लागी कुनै समय सीमा छैन, तर त्यहाँ सीमित कोष छ र आवेदकहरु लाई पहिले आउनुहोस् पहिलो सेवा को आधार मा कोष बाट सम्मानित गरिनेछ, त्यसैले यथाशीघ्र आवेदन दिन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
अधिक व्यापार संसाधन
डचटाउन मुख्य सडकहरू डचटाउन मा एक बलियो, फस्टाउने ब्यापारिक समुदाय लाई मद्दत गर्न को लागी हाम्रो छिमेकी व्यापार मालिकहरु को लागी संसाधनहरु र जानकारी प्रदान गर्ने लक्ष्य छ। तपाइँ मा अधिक व्यापार संसाधनहरु पाउन सक्नुहुन्छ dutchtownstl.org/ व्यवसाय.
तल दायर गरिएको Covid-19. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. कारोबार र Covid-19. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अक्टोबर 14th, 2021 .
डचटाउन STL.org Covid-19 EDA Cityण कोभिड १ by बाट प्रभावित शहर व्यवसायहरु को लागी